Fireproof Blanket စီးရီးများသည်အဓိကအားဖြင့်မီးသတ်နှင့်မီးလောင်လွယ်သောဖိုင်ဘာများဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးအထူးလုပ်ငန်းစဉ်ဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ အဓိကအသွင်အပြင်များ - မီးမလောင်နိုင်သော၊ အပူချိန်မြင့်မားခြင်း (၅၅၀ မှ ၁၁၀၀ ℃)၊ ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောတည်ဆောက်ပုံ၊ အမျက်မထွက်ခြင်း၊ မီးခံသေသပ်သောစောင်သည်အရာဝတ္ထုကိုပူနွေးသောနေရာများနှင့်မီးပွားawayရိယာများမှအကာအကွယ်ပေးနိုင်ပြီးလောင်ကျွမ်းခြင်းကိုလုံးဝကာကွယ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်ဖန်မျှင်အမျှင်၏ 550 ℃အပူခံနိုင်ရည်နှင့်ဆီလီကွန်ဂျယ်သတ္တုပြား၏ 260 ℃အပူချိန်ခံနိုင်ရည်ရှိသောထူးခြားသောလက္ခဏာများရှိသည်။
သေးငယ်တဲ့ Class A ရေနံ / အမဲဆီမီးနှင့်မီးတောက် -ups များအတွက် 1.
၂။ မီးလောင်လွယ်သောအခန်းမှထွက်လာသောအခါမီးလျှံများနှင့်မီးခိုးများမှကာကွယ်ရန် (သို့) အရည်သွန်းသောဒြပ်စင်များမှကာကွယ်ရန်ခေါင်းနှင့်ကိုယ်ခန္ဓာပတ် ၀ န်းကျင်တွင်ပါ ၀ င်နိုင်သည်။
၄။ ဖန်သားမျက်နှာပြင်နှင့်ဖိုက်ဘာမှန်ဖန်ထည်၊ အားလုံးအနား fireproof ချည်နှင့်အတူ serged နေကြသည်
7. လိုဂိုစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်, နှင့်တင်ပို့နိုင်ပါတယ်
မိသားစုမီးဖိုချောင်များ၊ သက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက်အခန်းများ၊ ကျောင်းအဆောင်များ၊ ဆေးရုံများ၊ ဖျော်ဖြေရေးနေရာများ၊ ဟိုတယ်များ၊ အထပ်မြင့်စီးပွားဖြစ်နှင့်လူနေအိမ်အဆောက်အ ဦး များ၊ သူနာပြုအိမ်များ၊ ကလေးသက်သာချောင်ချိရေးအိမ်များ၊ လူနေအိမ်များ၊ စက်ရုံအဆောင်များ၊ ဈေးဝယ်စင်တာများ၊ အင်တာနက်ကဖေးများ၊ ကားများ၊ ဓာတ်ဆီဆိုင်များ၊ အကျဉ်းထောင်များနှင့်လူနေထူထပ်သောနေရာများ။
၁ ။ သင်ကကုန်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီလားဒါမှမဟုတ်ထုတ်လုပ်သူလား။
ကျနော်တို့ 2000 ထုတ်လုပ်သူပါပဲ။
၂ ။ OEM ၀ န်ဆောင်မှုပေးလို့ရမလား
၃ ။ ငါ့ကိုနမူနာပို့ပေးနိုင်မလား? အခမဲ့လား။
ဟုတ်ပါတယ်, နမူနာအခမဲ့ဖြစ်သည်။ သို့သော်သင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်တာဝန်ရှိသည်
၄ ။ သငျသညျအကြှနျုပျကိုကမ်းလှမ်းသောစျေးနှုန်း, ပိုပြီးလျှော့စျေးဖြစ်နိုင်ပါတယ်?
၅ ။ အာမခံချက်ရှိလား။
ပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အာမခံကာလသည်ခြောက်လဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ၎င်းသည်အရည်အသွေးပြနာဖြစ်ပါကကျွန်ုပ်တို့သည်အစားထိုးခြင်း၊ ငွေပြန်အမ်းခြင်းကိုထောက်ပံ့သည်။
၆ ။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနည်းလမ်း
ပင်လယ်၊ လေကြောင်း၊ ရထားနှင့်ရထားဖြင့်။
၇ ။ ထုတ်ကုန်များ၏အရည်အသွေးကဘာလဲ။
ဖောက်သည်များ၏တုံ့ပြန်ချက်က“ အရည်အသွေးသည်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။ ”
၈ ။ ပေးပို့ချိန်ကောဘယ်လိုလဲ
ပုံမှန်အားဖြင့် ၇-၃၀ ရက်ကြိုတင်ငွေပေးချေပြီးနောက်။ နမူနာများကို ၁-၃ ရက်အတွင်းအပြီးပြင်ဆင်မည်။
နောက်တစ်ခု: acrylic coated ဖိုက်ဘာမှန်အထည်